विश्वमा सबैभन्दा धेरै कमाउने १० वटा भिडियो गेम - Sagarmatha Online News Portal
विश्वमा सबैभन्दा धेरै कमाउने १० वटा भिडियो गेम
एजेन्सी । सन् १९५८ मा विश्वकै पहिलो भिडियो गेम ‘टेनिस फर टू’ सार्वजनिक हुँदा त्यसले धेरैको ध्यान आकर्षित ग¥यो । नगरोस् पनि किन ? पहिलो भिडियो गेम निकै विशेष थियो र मानिसहरुका लागि नौलो प्रयोग थियो ।
अहिले दुनियाँमा असंख्य भिडियोगेमहरु उपलब्ध छन् । ती मध्ये सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्न सफल भिडियो गेमहरुको सूची यस्तो छ ।
४. वी : जापानी कम्पनी निन्टेन्डोले सन् २००६ मा ल्याएको अर्को लोकप्रिय भिडियो गेम हो धष्ष् । यो भिडियो गेमले हालसम्म १४ अर्ब ८० करोड डलर आम्दानी गरिसकेको छ ।